🥇 ▷ Mid ka mid ah seddexda taleefan ee lagu iibiyo Japan waa iPhone ✅
Mid ka mid ah seddexda taleefan ee lagu iibiyo Japan waa iPhone
Aqbalitaanka IPhone ee Japan waa mid cajiib ah
Mid ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee ganacsiga ee Apple Waqtiyadi ugu dambeeyay waxaa la gaarey heshiisyo gaar ah shirkadaha shirkadaha qaybinta kaladuwan si ay awood ugu yeeshaan inay iPhone u qaadaan Japan iyaga oo leh faa’iidooyin qaarkood. Kuwaas waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah hawl-wadeenka caanka ah NTT DoCoMo, iyo xallinta wararkii ugu dambeeyay, waxay umuuqataa in wax walba ay bilaabeen inay shaqeeyaan, maxaa yeelay gelitaanka taleefanka gacanta ee suuqaas ayaa ahaa mid cajiib ah.
IPhone wuxuu matalaa 36.6% suuqa mobilada ee Japan
Xaqiiqdi, haddii aan tixgelinno sahankii ugu dambeeyay ee ay sameysay shirkadda maxalliga ah ee MM Research Institute Ltd. oo ay dadkaas ka qaadaan dadka ku nool Bloomberg xilligan, sedexdii taleefoon ee lagu iibiyo Japan, mid ka mid ah waa iPhone. Tani waa lambar cad oo run ah haddii aan tixgelinno tartan weyn oo ay Apple ku leedahay Aasiya iyada oo ay ku saleysan yihiin qaar badan oo ka mid ah soosaarayaasha ugu waaweyn adduunka casriga.
In kasta oo ay caddahay in markii aan ka hadalno saddex meelood meel taleefannada gacanta aan soo bandhigi doonno tiro wakiil ah, tirooyinku waxay cadeeyeen in dhammaan tikniyooyinka smart ee lagu iibiyo Japan, iPhone ay hadda kujirto qayb dhan 36.6%. Taasi waxay ka dhigan tahay faa’iido buuxda oo ka sarreysa aalad kasta, iyo tan ugu muhiimsan Apple, mudnaanta astaanta shirkaddan mudnaanta leh, kahor Samsung.
Apple Waa hogaamiyaha aan laga tashan ee dhamaan hawl wadeenada
Intaa waxaa sii dheer, ka baxsan shuruudaha dhammaystirka ah, oo aad ugu wanaagsan Apple Waa kobaca ay shirkaddu ku soo aragtay suuqa Japan. Gaar ahaan, tirooyinka saddexdii bilood ee hore ee sanadkii hore waxay muujiyeen in kuwa Cupertino ay matalaan “kaliya” 25.5% alaabooyinka la soo dejiyo ee wadankaas. Sannad kadib, koritaanka wuxuu ahaa 11.1%, sanadka oo dhan 2013, Apple waxay iibisay Japan 14.43 milyan oo iPhone ah. Dabcan, heshiiska lala galay NTT DoCoMo, oo ah hawl wadeenka maxalliga ah ee ugu weyn, ayaa muhiimad weyn ka lahaa arrintan.
Qaybta kale ee xusid mudan ee xogtan ayaa ah in kaqeybgalka hoose ee iibinta taleefannada Samsung isla waqtigaas, ay keentay Apple, iyada oo iPhone, uu yahay hogaamiyaha ugu sareeya qaybtani saddexda hawl wadeen ee maxalliga ah. Xaaladda gaar ahaaneed ee NTT DoCoMo, tabarucaadkeedu wuxuu asaas u ahaa tan iyo markii heshiiskii u dambeeyay ee labada u dhaxeeyey uu dhigayo in la iibiyo oo keliya aaladda Apple, taasina waxay si cad u siisay shirkadda California.